AKHRISO:_ Qabiilada iyo Gobollada ay kasoo jeedaan xubnaha cusub ee MD Deni kusoo daray xukuumadiisa> | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta magacaabay Wasiir Ku-xigeeno iyo Wasiiru-Dowleyaal, kuwaas oo qeybtood laga wareejiyay Wasaaradihii ay joogeen, halka qaarna ay cusub yihiin.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in magacaabista Wasiir ku-xigeenada iyo Wasiiru-dowlayaashan ay ku timid Baahida loo qabo dhamaystirka Golaha Xukuumadda Dowladda Puntland oo aqoon, karti iyo waaya aragnimo uleh xilalka loo igmaday.
Hadaba Shabakadda Idil News ayaa hoos idin kugu soo gudbinaysa Gobalada iyo Beelaha ay ka yimaadeen Wasiir ku-xigeenada iyo Wasiiru-dowlayaashan;
1. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta Cabdullaahi Cabdisalaan Xasan, (Gobolka Mudug – Beesha Nuux-jibraahil “Majeerteen”)
2. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Bashiir Jaamac Maxamed, (Gobolka Mudug Beesha Reer Maxamuud “Majeerten”)
3. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Garoomada Cabdicasiis Maxamuud Macallin, (Gobalka Mudug – Beesha Idigfacle “Majeerteen”)
4. Bedelid, wasiir ku xigeenkii hore duulista iyo hawada oo loo bedelay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka Cimilada Sucaad Saalax Nuur, (Gobalka Sanaag – Warsangeli-Cumar)
1. Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Waxaa Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo), (Gobalka Bari – Beesha Cali Saleebaan “Majeerteen”)
2. Wasiiru-Dowlaha Madaxtooyada ee Xiriirka Goleyaasha Maxamed Xasan Ciise, (Gobalka Karkaar – Beesha Kaskii-qabbe)
3. Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Axmed Shire Siciid, (Gobalka Bari – Beesha Cali Jibraahil)
4. Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha, Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Fardowso Cismaan Cigaal, (Gobalka Mudug – Beesha Leelkase)
Previous articleDegdeg:- Abii Ahmed oo suaalo adag laga waydiinayo Dagaalka Somalida iyo Canfarta.
Next articleDAAWO:- Somaliland oo cabsi soo wajahday kadib markii somalia ay soo iibsatay Hub culus “Deymaha DFS laga Cafiyay oo iyana hinaas dhaliyay”.
Fanax October 22, 2019 At 5:01 pm
Soomaalida wax weyn baa runtii ka khaldan marka la eego fahanka khaldan ee ay ka qabaan nadaamka dawladnimo. War dawladnimo micnaheedu maahan in jifo iyo jilib kasta xilal loo macagaabo. Dawladnimada saxda ah waa shicibka oo deegaanadooda hoose lagu guddoonsiiyo xuquuqda ismaamuulka oo canshuuraha dib loogu celiyo say qaabkay ayagu rabaan horumarkooda ugu gaaraan.
Haddii la dhaho jifo iyo jilib kastaa xilal hala siiyo miisaaniyadday si xun u dhaawacaysaa oo hantidii shicibka wax loogu qaban lahaa baa xubnahan faro batay lagu khasaarinayaa oo taasu maahan talo caqli gal ah. Soomaalidu waa badoow aan dawladnimo waxba ka ogayn oo waana waxa halkaa dhigay.